Idempiere: yakavhurwa sosi ERP, CRM uye SCM + OSGI | Linux Vakapindwa muropa
Idempiere: Enterprise zviwanikwa manejimendi software
Idempiere yakavhurika sosi software inowanikwa yeLinux uye yakatsaurirwa kune chimwe chinhu Linux-based masisitimu anofanirwa kugadzirisa pane, bhizinesi uye nyanzvi software. Bhizinesi software dzimwe nguva ishoma kana sarudzo hadzifadze makambani, nepo makambani akaita seMicrosoft ane software yerudzi urwu. Idempiere chirongwa chinoda kuputsa neiyi maitiro.
Kutenda kunharaunda iyo Idempiere inosimudzira, kune nyanzvi yekushandisa kuronga turusi, kukwanisa kubata mapurojekiti anoitwa mukambani nenzira inoshanda uye inotyisa. Iyo ERP (Enterprise Resource Planning), ndiko kuti, sosi manejimendi manejimendi. Iyo zvakare ine yayo yepakati CRM (Mutengi Ukama Hukama Management), kana chii chakafanana, mutengi wehukama maneja maneja.
El ERP uye CRM yeiyo Idepmiere application ivo vanozoita kuti hupenyu huve nyore pakubatanidzwa kweLinux-yakavakirwa nharaunda mumabhizinesi. Asi ivo havasi vega, Idempiere zvakare ane SCM (Supply Chain Management) chinzvimbo, kana maneja wecheni. Asi kusiyana neAdempiere, yakavhurika sosi software iyo Idempiere yakavakirwa (Idempiere = ADempiere + OSGI), iyo yekupedzisira inosanganisa tekinoroji yeOSGI, ichibvumira kusangana kwemapulagi kuti achinje iwo ave scalable, modular uye yakazvimirira system.
Idempiere anotarisana nesoftware inodhura inowanikwa mumusika, yakavharwa uye nemarezinesi anodhura, asi pasina kuregeredza zviyero. Iyo rezinesi iri kugoverwa Idempiere mahara, iyo GPLv2, uye inowanikwa mune maviri mavhezheni, yewebhu vhezheni uye desktop desktop. Unogona kuyedza yemahara vhezheni uye yakabhadharwa vhezheni. Zvese zviri zviviri uye imwe yacho inokwanisa kubata makambani akati wandei kana mapoka emabhizinesi, zvichibvumira kusarudza mitauro yakati wandei nemari, ndeyevashandisi vakawanda uye tinogona kuva nezvirongwa zvakasiyana zveakaunzi panguva imwe chete.
Mamwe mashoko - idempiere.org
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Idempiere: Enterprise zviwanikwa manejimendi software
izvo zvinofanirwa kuvandudzwa mashandisirwo akawanda uye akawanda kuitira kuti vashandisi vaone kukosha kwekushandisa imwe system
Tichifunga nezve kuti SAP inomhanya pane linux, handingataure kuti isu tiri kushayikwa mune irwo rudzi rwe software.
Pamwe kana yakawanda uye yakagadzirirwa-software inodiwa kumabhizinesi madiki.
Pindura kuna drtanaka
Yakanaka sarudzo yekufunga nezvayo, pasina kupokana
Zvino iyo ODOO isati yavhurwa, imwe yeakanakisa ERP, CRM, uye zvimwe zvakawanda zviripo zviri kuchinja maratidziro ayo ekupa marezinesi, kuva kuvharwa kwakawanda kunogona kuita sarudzo yakanaka. Zvaive zvinosuwisa kuti ini ndinofunga akanakisa akavhurika ERP, sekushugaCRM, ngativei netariro kuti mamwe mapurojekiti kana vakura haavhare.
luigys bull akadaro
Ini ndinofarira chaizvo kuti chinyorwa changu chakakushandira iwe, yemahara software yakabatsira zvakanyanya kune vadiki, Idempiere ndeimwe yeaya ma software anofanirwa kupihwa mukana. Ziva kuti pane kukanganisa, hapana yakabhadharwa vhezheni yeImempiere, idempiere yakasununguka uye yakasununguka (Ndinovimba ichagara yakaita seizvi)
Pindura kuna luigys toro
Gnu Chess, anopikisa ane simba kutamba chess
VeltOS, kugovera kunoenderana neArchLinux